Dilkii laba geesoodka ahaa ee Gina iyo Marinus ee ka dhacay shineemada Pathé Groningen: Martin Vrijland
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 27 Oktoobar 2019	• 24 Comments
"Runtii waan naxay. In wax la mid ah ay ku dhacaan shineemo, meel qof walbaa mararka qaar u fadhiyo inuu daawado filim. Tani waa mid aan caadi ahayn.Taasi waxay ahayd ficil celinta xildhibaanka magaalada Marjet Woldhuis ee jajabinta golaha 100% Groningen. Taasina waa saamaynta naxdinta leh ee loo baahan yahay si loo meel mariyo sharciyo cusub haddii aan markale la macaamilno PsyOp soo socda. Dabcan taasi lama dhihi karo; xitaa kama fikiri kartid. Taasi waa wax laga xumaado qofka xigtada ah iyo ciidanka troll (oo kormeeraya doodaha warbaahinta bulshada) ayaa naftiinnu iska soo dhici doonaan. Haddase qarnigan lagu jiro tikniyoolajiyadda qotodheer, waa inaan aaminsanahay in gobolka iyo warbaahinta aynaan ku ciyaarin inaan soo bandhigno sharciyo aan waligood la aqbali doonin.
Muddo ka hor waxaa jiray hadal ka soo saaraya sharciyo dadka lagu xiri karo iyadoo aan faragalin lagu sameynin garsooraha ama dhakhtarka dhimirka. Codsi ka yimid goobtan iyo xoogaa iska caabin ah oo ka timid bulshada waqtigaas ayaa sameeyey qolkii labaad ee ururka waxqabadka biilka oo ka socda Edith Schippers. Waqtigii weli ma bislaanin. Dadku marka hore waa inay arkaan waxa daruuriga ah. Haddii Ruinerwold 'reerka cirfiidka' uu horseeday ka saarida marinka guriga si ay awood ugu yeeshaan inay gadaal ka eegtaan albaab walba iyo deris ahaan ama saaxiibo dhow. maskaxda loo oggol yahay inay soo wacaan oo biilkan sidoo kale la aqbalo, qof walbaa wuxuu ku dhammaan karaa machadka GGZ waligiisna soo noqon maayo. Sababta oo ah halkaas ayaa laguugu tuuri karaa qolka go'doominta adigoon wax sabab ah ku hayn oo aad u hesho daawo aad ku eegto si aad u ogaato in aad waalantahay.
"Haa, laakiin Vrijland. Dilkan ayaa runtii dhacay. Waan ogahay dadka ku nool meel u dhow.","Shakhsiyaadka waan aqaanay","Waxaan haystaa saaxiibo ku noolaa oo agtooda ah","Waan ogahay dadka ay saaxiibbadood ahaayeen","Waan garanayaa qoyska","waxaa jira hambalyo badan","haddii kale naftaada u tag aaska, ka dibna waad arki doontaa","Waan ogahay milkiilaha shirkadda","nacasnimo u ah ehelka!","Waxaan ogahay in Mr. Ergün run ahaantii jiroIyo sidaas darteed jawaabo badan ayaa jiri doona. Dhammaanteed way run noqon kartaa, laakiin hadda oo aan wax ka ogaanno jiritaanka qoto-dheer oo aan ognahay in warbaahinta bulsheed sidoo kale ay kormeeraan khabiiro xirfad-yaqaanno ah, si dambe uma ogaan karno hubaal. Intaa waxaa sii dheer, protagonists-ka waxaa sidoo kale laga yaabaa in loosiiyay boorso lacag ah oo ay aqoonsi cusub ku leeyihiin Argentina, laakiin taasi waa intaas. Deepfakes waxay sameyn kartaa dabeecad kasta, oo ay kujiraan taariikhda oo dhan, waxayna u muuqdaan wax macquul ah (akhri halkan sida ay u shaqeyso). Waxaad sidoo kale la shaqeyn kartaa ficil ahaan sidii dembiile, si aadan aqoon u lahayn. Ma dhihi kartid. Wax kasta oo aan ognahay, waxaan ku naqaannaa warbaahinta iyo warbaahinta bulshada. Marka laga eego dhinaca farsamo ahaan waa wax suurta gal ah in la isku daro PsyOps oo haddii aad soo bandhigi karto sharciyo aan had iyo jeer la aqbali doonin, waxaad gaadhay himiladaada.
Kiiskani wuxuu si uun u horseedi karaa qaab aqbalaad ah soo ururinta fikirka dhib kasta leh ama qof kasta oo aan la shaqeynaynin siyaasadda gobolka. Markaa waxaad aasaaska u dhigtay dowlad booliis fasiis ah jaakad dhogor leh: yeey ku jirta dharka idaha.
Horey ayaan u baranay booliiska oo na weydiisanaya aqoonsi. Taasi waxay sidoo kale ka dhacday xukunkii '40 /' 45. Waxaan xasuustaa waqti markii aad socod lugayn lahayd adigoon haysan baasaboor ama Aqoonsi oo cidna weligeed aan wax kaa weydiin. Marna, weligaa, ma ahan sanado! Waxay ahayd uun mawduuc aan jirin; wax superfluous. Xitaa kumaysan wadin baasaboor ama Aqoonsi. Dhallinta maanta waxa loo isticmaalaa inay markasta ku haystaan ​​Aqoonsigooda, sababtoo ah nooc kasta oo sharci ah oo fuliya. Aqoonso goorta la iibinayo cabitaannada, markii la gelayo diskooga iyo xaalado kale oo badan. Waxaanna u aragnaa inay tahay wax caadi ah, maxaa yeelay waxaa jiray dhibaatooyin mar hore u baahnaa soo bandhigidda waajibaadkaas. Waana taas sida saxda ah ee aan aragno. Qalliinka cilmi-nafsiga (PsyOp), dhibaato saameyn weyn oo bulsheed ayaa had iyo jeer la abuuraa, ka dib jawaabta ayaa kicisa (iyada oo loo sii marayo barnaamijyada telefishanka sida Pauw iyo wadahadallada warbaahinta bulshada) ka dibna xalka ayaa la bixiyaa. Taasi had iyo jeer waa sharci adag oo adag: booliis badan.
Mustaqbalka dhow, ma aha oo kaliya in la soo bandhigo Aqoonsigaaga waa dambi, laakiin sidoo kale waa lagaa saari karaa gurigaaga bilaa dambi dhaaf iyo adigoon bixin wax sabab ah. Markaa waxaad ku dhammaan kartaa qolka GGZ bilaa daaqadaha ah waxaana lagu siin karaa dawo kaa dhigaysa inaad dareento wax yar dawakh. Haddii, dhowr saacadood ka dib, aad fadhiisanaysay qolkaas bilaa daaqadaha oo aad bilawday inaad muujiso dabeecad aan caadi ahayn (tusaale ahaan, waxaad noqoneysaa mid lagu falo), waxay macnaheedu noqon kartaa inaad runtii galayso GGZ mall mill. Caanleyda kuma buuqdo. Waadna raacday sharcigii suurtageliyay taas oo dhan, maxaa yeelay waxay ahayd mid aad loogu baahan yahay; dilalka Pathé, Anne Faber, Ruinerwold, for, for. Waxay u egtahay filim argagax leh Meel qof walbaa mararka qaar fadhiisto si uu u daawado filim.
Waxaan kuu sharaxnay inaad sidoo kale ka fikirto fiidiyowga hoose: "Ninku waa inuu u qalmaa, waa inuu muujiyey dabeecad shaki leh" Adiga iyo inbadan oo badan ayaa lagugu soo gelin doonaa qaabka aqbalaada ee booliis galbeedka ku lugta leh.
Miyaad daawataa TV, taxane ama filim maalin kasta? Markaas waxaad ku buuxsameysaa hypnosis oo aan halis aheyn
Waxaan sii wadeynaa in aan qaadno Trumanshow siyaasadda iyo warbaahinta si dhab ah
Inta badan oo horey loo qoray oo ku saabsan Trumanshow ee 'maalin walba' dhabta ah '
Tags: tacsi, featured, film, ku jawaabay, yaabay, Gina, Groningen, Marinus, warbaahinta, dilalka, Pathé, Psyop, bulshada
27 October 2019 ee 11: 50
Haa, wuxuu jiray 33 sano ...
27 October 2019 ee 12: 47
Lambarka 33 wuxuu tixraac u yahay bulshooyinka qarsoodiga ah ee dhammaan hoggaamiyeyaasha siyaasadda, caddaaladda, sharciga iyo saxaafadda ay qayb ka yihiin.
Iyagu waa kuwa dayactira Trumanshow: Xaqiiqada sidaad u aragto.
27 October 2019 ee 13: 08
Ka fikir adiga..also filimka lagu dhajiyay maqaalkan ee booliisku ay ku xireen Michigan ka dib markii aan la tusin Aqoonsiga, kaliya waxaa loo dejin karaa si daawadayaasha ay ula qabsadaan gobolka booliiska isla markaana kugu cabsi geliyaan in lagu xiro haddii aadan iskaashi la yeelan. .
Waa tusaale wanaagsan oo ah gobolka booliiska ee waxqabadka badan, maadaama aan si isa soo taray ugu aragno Nederland. Waad aqbali doontaa dhammaan sharciyada looga baahan yahay tan, sababtoo ah waxaad si indho la’aan ah ula wareegeysaa 'dhibaatooyinka saameynta weyn ee bulshada' warbaahinta.
27 October 2019 ee 13: 16
Dadweynaha ayaa umuuqda inay u diyaar garoobaan cafis cafis ee suuro galnimada "shaqsiyaadka jahwareerka" (oo summad u lahaan kara qof walba ... Midowgii Soofiyeeti hore waxaa loogu yeeri jiray "kuwa aan khafiifin)
27 October 2019 ee 13: 23
Waxaan u maleynayaa in dabeecadda Ergün S ay ku saleysan tahay Kramer oo ka socota Seinfeld 😉
27 October 2019 ee 14: 44
Kramer wuxuu kaloo ahaa nin jahwareersan ..
27 October 2019 ee 15: 16
Gabadha, oo ninkeeda la dhigay cisbitaalka, waxay xaafada ku tilmaamaysaa mid quruxsan lafteeda. "Inta badan waa halka 'ku noolaanshaha iyo sii deynta' halkan. Midba midka kale ha murugoodo ama ha isku xanto. Guri kastaa waxay leeyihiin dhul ay iyagu leeyihiin oo aad ku nooshahay gaar ahaan. Dadka la dilay, si isku mid ah ayaa loo dalbadaa.
Haa haa .. sidaa daraadeed derisyadu runtii iyaga ma aysan aqoonin .. ama runtii maahan ..
Hagaag ma ogid, miyaad tahay?
4 caroline ayaa qoray:
27 October 2019 ee 18: 31
Waa dhakhso iyo fududahay in la garto .. haddii aad rabto inaad aragto! Martin, muddo dheer ayaan ku daba joogay, laga soo bilaabo markii aad i tustay dabeecadda saxda ah ee Anthony Kat, ixtiraam badan ayaan kuu hayaa adiga wax badanna waan kaa bartay! Mahadsanid
27 October 2019 ee 22: 24
Sidee firfircoon ayuu John de Mol ula akhrin doonaa tan? Hada dariska si lama filaan ah ayey u ogaadaan dhibanayaashu?
27 October 2019 ee 22: 27
Ka arag daqiiqada 9: 09…
27 October 2019 ee 16: 09
Wax soo saarka noocan oo kale ah ee shineemo ... weyn
30 October 2019 ee 06: 57
Daqiiqadaha 3.33, ma helo wax cimilo ah oo ciid ah.
27 October 2019 ee 20: 46
De Telegraaf waa duni galaas iyo Enceclopedia, maalin walba,
Sidee taasi macquul u tahay?
De Telegraaf wey ogtahay waxwalba? had iyo jeer! isla markiiba!
Super Columbo's, Sherlock Holmes halkaas ayey ku leeyihiin.
Waxay ogyihiin inay nadiifin ku ahaayeen shineemadaas.
Waxay ka yaqaanaan carruurta de Spook (ee Drente) inay aqoon sare leeyihiin telegraafkuna waa kan keliya ee akhrin kara bogagga barta facebook ee carruurta. (ku fur xiriir hoose hoosta leh qaabab qarsoon)
laakiin ha iloobin Amsterdam, Hugo de Groot square.
Johny van de H iyo welly iyo Schoolenberg waxay leeyihiin kubbadda dheemanka ee qofna uusan lahayn, waa tartanka Agatha Christie ee adduunka, taariikhda oo dhan ay isla markiiba ogyihiin. (taasi dabcan waxaa loola jeedaa in la naco)
Waxaan rabaa in aan u sharaxo xirmo caano ah, u diro Johny van de H koob caano ah, oo uu ku soo noqdo dhalo coke ah, waa xayawaanka. Waxaa laga yaabaa Matthijs N inuu la soo noqdo lix xabbadood oo masiixi ah, ka dib wuxuu ku dadaali lahaa intii karaankiisa ah.
De Telegraaf had iyo jeer way ogtahay Wax walba saacado gudahood gudahood! hey wanaagsan
28 October 2019 ee 13: 52
Waxaan ku dari karaa liistadayda: xaqa loo leeyahay in la diido gelitaanka xarun cilmi-nafsi oo aan lahayn amar maxkamadeed waa in la ilaaliyaa.
Xuquuqda aad u leedahay inaad diido daawooyinka waa inay had iyo jeer ansax ahaataa iyadoo aan loo eegayn waxa qaaliga u maleeyo.
(go'aan ka gaarista jirka iyo maskaxda)
Waxaan ka fekerayaa inta xuquuq ee liiskan ku saabsan sanadaha 10 weli ay ansax yihiin, tilmaam fiican oo u ah xaaladda hadda jirta ee bulshada.
28 October 2019 ee 18: 31
AD ayaa soo warinaysa: "GGZ waxay rabtay inay ku qasabto tuhun laga shakiyay dilida shineemada in loo daaweeyo" Sidii ayaan u idhi: "Dhibaato, Falcelin, Xallin" ee ku saabsan biilka Edith Schippers ee ka imanaya xukuumaddii hore. PsyOp?
N. Leeman ayaa qoray:
28 October 2019 ee 23: 12
Qaabka saxda ah ayaa horeyba loogu siiyay sharciga deeq bixiyaha. Madaxbanaanida jirka ayaa si rasmi ah loo baabi'iyay.
Tallaalka qasabka ah wuxuu hadda ku jiraa usbuuca ... liiska liistada rajadiisu innaba dhammaad ma leh.
30 October 2019 ee 07: 01
Sinnaw ff chipping, oo waad dhamaatay.
30 October 2019 ee 07: 06
WUXUU KHATARTA ugu badan, Carp Cop Waligaa oo aad Waligaa aragtay !,
30 October 2019 ee 21: 07
Kaliya u fiirso.
Maqaalka blogger (Martin Vrijland halkan) wuxuu horay noogu tusay in dhacdadani tahay mid aan hagaagsaneyn
waa mid aan lagu kalsoonaan karin taasna waxaa xaqiijiyey 'disinfo' oo ay weheliso
Tirtirida xaqiiqooyin kala duwan oo muhiim ah.
Marinus ma laha magac awoood?
iyo muxuu Gina u yeelan waayey magaca dambe? laakiin da '
wiilku miyuusan kulahayn Kuuriya?
gabadhana sidoo kale?
Muxuu safarka aamusnaanta ah ugula muuqdaa wax lagu qoslo, waxay noo egtahay, waliba waxay muhiim utahay howsha.
Maxaa wax kasta looga ogaa dhibanaha iyo ku dhawaad ​​waxkastoo ku saabsan dhibbanayaasha, Suura gal ma ahan
Dadku way jahwareersan yihiin? sida ku xusan qodobka hoose (iskuxiran) sida laga soo xigtay deriska, maxad deriska dhahdaa, waa ilaah waa HALKAN HADDII runtiisu run tahay, waxa la yaabka ah, waxaad la yaabtay markii xayawaanku ay cunaan sharoobada kareemkaaga, laakiin waad ka naxday taas Dhacdo naxdin leh.
Miyir-qabeyaasha miyir-qabka ah ayaa codkaaga maqlaya, way simbiriirixan tahay!
30 October 2019 ee 21: 14
Ha illoobin sababta, waxaad la yaabaysaa, ma jiro jacayl jacayl ah
sawir lamaane nadiifin ah Marinus & Gina oo kujira bios van Pathee ee Groningen….
Waa hagaag iyo su'aalo badan oo dheeri ah oo furan
adje ayaa qoray:
30 October 2019 ee 23: 20
Hagaag, soddog walaalkay waa maamule sinemaadaas wuxuuna saaxiibo la ahaa lamaanaha.
Waxaan weydiin doonaa bal inuu u maleeyo inay tahay cilmi nafsi ama inuu yahay.
Waqti looma arag xeebta si kastaba. Salaan!
31 October 2019 ee 10: 17
Magac walaalkiis waa maxay, markaa ma ku yeeri karaa? Oo miyaanad hore u weydiisan inay ahayd markii ay dhacday Adje?
Markaa waad ogtahay inuu saaxiibo la ahaa lamaanaha, laakiin weli kama aysan hadlin arintaan?
Sideed ku ogaatay inuu saaxiib la ahaa lamaanaha?
Haddiise ay jiraan oo isagu asxaab buu la ahaa (taas, aniga ahaan, waxay ila tahay inay horay uga sii kala duwan tahay), maxaa yeelay maareeyayaasha maahan saaxiibo toos toos ula ah kuwa nadiifiyaha ah), markaa wali macquulbaa inay tahay PsyOp.
Adje malaha waa jiir?
31 October 2019 ee 17: 32
Waan ka soo baxay oo ma aqaan 'Adje', wax faallooyin ah oo hore looma arag .. Suuragal ma ahan inuu isagu ka mid yahay wiilasha qoraalka ama u dhaqmo sidii addoonka wiilasha qoraalka, dhagarlaaweyaasha iyo khayaanada. . Iyagu aad bay ugu wanaagsan yihiin taas sababta oo ah dadku waxay liqdaa wax walba.
FreshWind ayaa qoray:
31 October 2019 ee 23: 06
Run ama been… psy-op ama maya
"Waligaa ha u oggolaan in mushkilad khasaare lihi jirto"
Ma aha xigashadayda…. Laakiin wax walba ayaa lagu yiri.
Dhacdo; si ula kac ah looga hortagin iyo / ama fududeyn waa isku mid sida wax la sameeyo!
« Weerarada argagixisada been abuurka ah ee London, Manchester, Paris, Barcelona iyo Rotterdam ee 23 iyo 24 October? (DHAMMAAN)
Daloolka madow ee uu sawiray NASA runti waa plasma plasmid ah »
Guud ahaan Wadarta: 13.842.587
SandinG op Gobol booliis ah oo ka xun Nazi Jarmalka ayaa ku soo dhacaya sida yey oo ku jirta dharka idaha mana arki kartid
Martin Vrijland op Weeraradu miyey bilaabeen? Psycholance waxaa horey loo siiyay iftiinka cagaaran ee 2018 iyadoo lagu saleynayo kiiska Els Borst / Bart van U.